Artha Sarokar :: Nepal's No.1 Economic News portal.: 'स्याल हुइयाँमा लागी, फाली हाल्न' हुन्न है ! सेयर बजारमा 'बढ्न नसकेपनि अडिन सिकौं'
ARCHIVE, BLOG, MARKET WATCH, SHARE MARKET » 'स्याल हुइयाँमा लागी, फाली हाल्न' हुन्न है ! सेयर बजारमा 'बढ्न नसकेपनि अडिन सिकौं'
नवराज घिमिरे, विश्लेषक / लगानीकर्ता
हरेकजसो राजनीतिक चेतना भएका नेपालीलाई अहिले २० बर्षपछी भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले छपक्कै छोपेको छ । राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्न रुचाउने म, त्यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन । अर्थ सरोकार डटकममार्फत मैले बाँडीरहेको अनुभवको पछील्लो अध्यायका लागि धेरैले अनुरोध गर्नुभएको छ । चुनावी परिणाम हेर्न व्यस्त हरेक नेपालीजस्तै मैलेपनि छोटो समय निकालेर केहि लेख्ने प्रयासगरेको छु आज।
नेपाली सेयर वजारमा लगानी गर्ने हामी आम लगानीकर्ताले वुझ्नु पर्ने सरल कुरा के हो भने , जव हामी सेयर खरिद गर्छौ, त्यस अगाडीनै उक्त कम्पनीको इपिएस , पिइ रेसियो , रिजर्भ , अघल्लो वर्षहरुको वोनस दर , वजार लिडर , त्रैमासिक वित्तिय विवरण र संचालकहरु के कस्ता छन भनेर हेर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक हुन आउंछ । हामीमध्ये धेरैको बानी के छ भने अर्काको देखासेखिमा सेयर किनीहाल्ने अनि घरमा पुगेर ल्यपटप खोलेर यि माथि उल्लेख गरेका कुराहरु हेर्ने गर्छौ । यसो गर्दा हामीले किनिरहेको कम्पनी 'झुर' पर्न सक्छ र भोलिपल्टबाटै सेयर वेच्न थाल्छौ , अडन सक्दैनौ ।
सेयर वजारमा यदि दरिइरहने हो भने हामीले सुरुमै कम्पनीको बारेमा अधिकभन्दा अधिक जानकारी लिएर मात्रै सेयर खरिद गर्ने बानी वसाल्नुपर्छ । हुन सक्छ 'व्लु चिप' भनिएका कम्पनीहरुपनि विविध कारणले गर्दा घट्नपनि सक्छन् । त्यसबाट हामी विचलित नभई अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ न सकेको अड्नु पर्नेहुन्छ । भन्नाले कहिले काहीँ चल्ने वजारको 'स्याल हुइयाँमा लागी, फाली हाल्न हुन्न' भनेजस्तै अडनुपर्छ ।
जस्तो की केहि दिन पहिला यस्तै एउटा घटना भयो !
गत चैत्र ३ तिरको कुरा हो एउटा अमुक कम्पनी निम्नतम विन्दु रु१६५०/- मा झर्यो, वा भनौ झारियो । त्यसताका जो अड्न नसक्ने थिए, ति डराए र आफ्नो भएको सेयर निम्नतम मूल्यमै फाले । ठिक दुई महिनापछी हिजो उक्त कम्पनीको वजार मूल्य रु२५००/- मा पुग्यो । विचरा उस्ले खरिद गर्दै वुझेर खरिद त गरेको थियो तर के गर्नु 'स्याल हुईयाँको पछाडी' लागेर अड्न नसक्दा आज उसले ठूलै घाटा वेहोरीरहनु परेको छ ।
त्यसैले मैले विभन्न टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमा र यसै अर्थ सरोकार अनलाईन वाट भन्दै आएको केहो भने राम्रा राम्रा कम्पनी छानेर खरिद गर्ने अनि विचमा मूल्य घटदै आएर आधै मूल्य भएछ भने पनि अड्ने ।सकिन्छ भने वरु सोही कम्पनीको थप सेयर किनेर अगाडी बढ्ने हो । किनकी यसो गर्दा पहिला किनेको सेयरको मूल्यमा पनि लागत घटछ । यो समयमा ऋण गरेर पनि तपाईले सेयर खरिद गर्नु हुन्छ भने अवस्य पनि तपाईले नाफा कमाउन सक्नु हुन्छ ।
Tags : ARCHIVE, BLOG, MARKET WATCH, SHARE MARKET